ကွန်ဂရက် ရွှေတံဆိပ် ဆု ကို အမေရိကန် ခရီးစဉ်မှာ ဒေါ်စု လက္ခံမည် | Freedom News Group
by FNG on July 19, 2012	အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ် ဥက္ကဌ နှင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အမတ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု
လက္ခံ ရယူ မှာ ဖြစ်တယ် လို့ဝါရှင်တန် က လာတဲ့ AP သတင်း မှာ ဖော်ပြထား ပါတယ်။ ဒီဆု ကို ကွန်ဂရက် မှာ စက်တင် ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့ကျ ရင် အခမ်း အနား နဲ့ပေး အပ် မှာဖြစ်
အမေရိကန် နိုင်ငံ ခြား ရေး ၀န်ကြီးဌာန က လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို လာရောက်လည်
ပတ် ဖို့တရား ၀င် ဖိတ် ခေါ် ထား ပြီး အမေရိကန် အစိုးရ သမ္မတ အိုဘား နဲ့လည်း အိမ်ဖြူတော်
မှာ တွေ့ ဆုံ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရီဇိုးနား လွှတ်တော် အမတ် ဂျွန်မက်ကိန်း က မြန်မာ နိုင်ငံ ကို လာရောက် စဉ် မှာ ဒေါ်အောင်
ဆန်းစုကြည် ကို ဒီဆု ကို ကိုယ်တိုင် ကိုယ် ကျ လက်ခံ ယူ နိုင် ဖို့မျှော်လင့် စောင့် စား နေ ခဲ့ တယ်
လို့ပြော ဆို ခဲ့ ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့အမေရိကန် ခရီးစဉ် မှာ အမေရိကန်အခြေစိုက် Atlantic Council မှ
ပေး အပ် ချီးမြှင့် မယ့် Global Citizen Award ဆု ကို လည်း တက်ရောက် လက္ခံ ရယူမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် ကွန်ဂရက် က ပေး အပ် ချီးမြှင့် တဲ့ ဆု တွေ အနက် ကွန်ဂရက် ရွှေတံဆိပ်ဆု အရပ်ဖက်
ဆိုင်ရာ အမြင့်ဆုံး ဂုဏ်ထူးဆောင် တံဆိပ် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
Congress Gold Medal , Aung San Suu Kyi, Buma , Myanmar
From: သတင်း, ပြည်ပသတင်း	← မူဆလင် သူဌေးတစ်ဦးကို နစကမှ လာဘ်ငွေ သိန်း ၁၃၀ ယူပြီး ပြန်လွှတ်ပေး
၆၅ နှစ် မြောက် အာဇာနည် နေ့မြန်မာ နိုင်ငံ တ၀ှမ်း တွင်ကျင်းပ | Photo Gallery →
Contact Us. info@freedomnewsgroup.com	Myanmar News in EnglishMyanmar Emerges From the ShadowsMyanmar's women boxers land blows for equalitySoccer-Myanmar's fans riot after Southeast Asian Games knockoutMyanmar's MPs lack resourcesU.N. agency says Myanmar, Golden Triangle opium cultivation jumpsUN: Poverty pushing Myanmar opium output higherUS blacklists Myanmar firms for NKorea arms tradeUS blacklists Myanmar firms for arms trade with N.Korea27 th Myanmar SEA Game Opening Ceremony Dining & Wine Discover wines from around the world
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,610,212 hits